တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာဆီယံက ကပ်ရောဂါဘေးမှ ပြန်လည်နလံထူနိုင်ရေး စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှု ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာစေရန် သဘောတူ - Xinhua News Agency
ဘန်ဒါဆရီဘီဂါဝန် ၊ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း(အာဆီယံ) ခေါင်းဆောင်တို့သည် ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံမှု(RCEP) သဘောတူညီချက်၏ ကနဦး အကောင်အထည်ဖော်မှု အပါအဝင် COVID-19 ကပ်ရောဂါဘေးမှ ဒေသပြန်လည်နလံထူနိုင်ရေးအတွက် ကူညီပေးရန် နက်ရှိုင်းစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေးအတွက် အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်တွင် သဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။အွန်လိုင်းဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၂၄ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တရုတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပူးတွဲကြေညာချက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံက ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ၊ လူမှုဖူလုံရေး ၊ စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှု ၊ ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းရေး နှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အပါအဝင် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် နှစ်ဘက်လုံးက ၎င်းတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို နက်ရှိုင်းစေရေး လမ်းညွှန်ပေးမည့် အာဆီယံ ဘက်စုံပြန်လည်ထူထောင်ရေးမူဘောင် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစီအစဉ်အား ထောက်ပံ့ရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့ရှိ ဖနွမ်းပင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင် Sinovac COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ထုတ်ပိုးထားသည့် ကုန်သေတ္တာအား သယ်ယူနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အာဆီယံက တရုတ်နိုင်ငံအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ချဲ့ထွင်ခြင်း နှင့် COVID-19 အာဆီယံတုံ့ပြန်ရေးရန်ပုံငွေအား ထောက်ပံ့ခြင်း ၊ ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွင် ကျန်းမာရေး အရာရှိများ နှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား လေ့ကျင့်ပေးခြင်းကဲ့သို့သော မူဘောင်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အဓိကဦးစားပေးကဏ္ဍများအား အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တက်ကြွသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ချီးကျူးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်ရှီးကျွမ့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ Pingxiang မြို့ရှိ တရုတ်-ဗီယက်နမ် နယ်စပ်၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဖြတ်သန်းသွားလာရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည့် ကုန်တင်ယာဉ်များအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
နှစ်ဘက်လုံးက COVID-19 ကပ်ရောဂါကို တုံ့ပြန်ရေး နှင့် ဒေသတွင်းစီးပွားရေး ပြန်လည်နလံထူလာရေး အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်ရန် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာဆီယံအကြား စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှု၏ အရေးပါမှုကို အလေးပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ခေါင်းဆောင်များက တရုတ်-အာဆီယံ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ကို မြှင့်တင်ရန် နှင့် “ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးတွင် ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုဖန်တီးခြင်း နှင့် ဖြစ်ထွန်းမှု နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အရင်းအမြစ်အသစ်များ အားပေးမြှင့်တင်ခြင်းတို့ အပါအဝင်” လွတ်လပ်သည့်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အရ အခြားနေရာများတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အပြန်အလှန် ပွင့်လင်းမှုကို ရှာဖွေရေးအတွက် သဘောတူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စီးပွားရေးစင်္ကြံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး သာမက စီးပွားရေး ၊ ကုန်သွယ်မှု ၊ စက်မှုဇုန်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် ဒေသတွင်းရှိ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များ၏ ချိတ်ဆက်မှု နှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့အား မြှင့်တင်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းစေရေး လိုအပ်ကြောင်းကို ခေါင်းဆောင်များက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခြားပူးတွဲကြေညာချက်တွင် အာဆီယံ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် ဒေသတွင်း စိမ်းလန်းပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးချဲ့ရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံက ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပြီး ဗီဒီယိုအွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း(အာဆီယံ) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ၃၈ ကြိမ် နှင့် ၃၉ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး COVID-19 ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး နှင့် စီးပွားရေးပြန်လည်နလံထူအောင် မြှင့်တင်ရေးက ဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်(အာဂျင်တာ)ထဲတွင် အမြင့်ဆုံးနေရာတွင်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံအပြင် အာဆီယံအသင်းကြီးတွင် ကမ္ဘောဒီးယား ၊ အင်ဒိုနီးရှား ၊ လာအို ၊ မလေးရှား ၊ မြန်မာ ၊ ဖိလစ်ပိုင် ၊ စင်ကာပူ ၊ ထိုင်း နှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့လည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BANDAR SERI BEGAWAN, Oct. 26 (Xinhua) — The leaders of China and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) agreed on Tuesday to deepen cooperation to help the region recover from the COVID-19 pandemic, including the early implementation of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement.
Photo 1 – People walk out of the venue of the 18th China-ASEAN Expo in Nanning, capital of south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, Sept. 13, 2021. (Xinhua/Lu Boan)
Photo2– An airport worker transports packages of Sinovac COVID-19 vaccine at Phnom Penh International Airport in Phnom Penh, Cambodia, on Oct. 14, 2021. (Photo by Phearum/Xinhua)
Photo3– Aerial photo taken on Jan. 3, 2020 shows vehicles waiting to pass the port of the Friendship Pass on the China-Vietnam border in Pingxiang, south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Cao Yiming)